काठमाडौं– ग्यालेक्सी पब्लिक उच्चमाध्यमिक विद्यालयले आयोजना गरेको एकदिने विज्ञान प्रदर्शनीमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत विदुषी अर्याल विज्ञान– प्रविधिको इतिहास व्याख्या गर्न व्यस्त थिइन् ।
नजिकै बेन्चमा लस्करै बसेका उनका सहयोगी चाहिँ आगन्तुकलाई वैज्ञानिकको फोटो र उनीहरूको आविष्कार सचित्र देखाउँथे । ‘स्वागत छ तपाईंलाई ! यी हुन्, ‘अलेक्जेन्डर ग्रामवेल, जसले हाम्रो लागि टेलिफोन आविष्कार गर्नुभयो,’ उनी उत्साहसाथ भन्दै थिइन् ।
बालबालिकामा सिजर्नशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना गर्दै आएको संस्थापक प्रिन्सिपल गीता राणाले जानकारी गराइन् । ‘महान् वैज्ञानिकले प्रतिवादन गरेको सिद्धान्त र तिनीहरूको प्रयोगात्मक विधि विद्यार्थीले सजिलै सिकून् भनी प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो,’ राणाले भनिन् ।
प्रदर्शनी अवलोकन गर्न आएका नेपाल विज्ञान–प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का उपकुलपति प्राध्यापक डा. जीवराज पोखरेलले यस्ता प्रदर्शनीले विद्यार्थीमा सिकाइ अभिवृद्घि गर्ने बताए । ‘हाम्रा स्कुले बालबालिका लागि उत्कृष्ट विज्ञान प्रयोगशाला, भवन छैनन् । छिमेकी मुलुक चीन, भारतले जसरी विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
युकेजीमा अध्ययनरत अन्नेसा थापा बोटविरुवा अंकुरणबारे बुझाउँदै थिइन् । नजिकै रहेकी उनकी साथी काइँयोले कपाल कोर्दै तल रहेको कागजको टुक्रा देखाउँदै विद्युतीय चुम्बकीय गुणबारे जानकारी दिइरहेकी थिइन् । युकेजीमा अध्ययनरत बालबालिकाको विज्ञान मोह देख्दा भावी दिनमा विज्ञान–प्रविधिको भविष्यलाई संकेत गथ्र्यो ।
कक्षा २ मा अध्ययनरत प्रज्ज्वल राजवंशी चन्द्रमाको कलाबारे व्याख्या गर्दै थिए । उनले चन्द्रमाको आकार परिवर्तनबारे सुनाएका थिए ।
प्रदर्शनी हेर्न आएका एक अभिभावक भन्दै थिए, ‘साना नानीहरूले विज्ञानका बारेमा दिएको प्रस्तुतिले मन छोयो ।’ कक्षा ७ मा अध्ययनरत सौम्य सिग्देलले प्रकाश सरल रेखामा हिँड्छ भन्ने अवधारणालाई प्रयोगात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैगरी, कक्षा ७ की छात्रा प्रशंसा केसीले विज्ञान प्रदर्शनीले भावी दिनमा विज्ञानको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न टेवा पुग्ने बताइन् । कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीले पाठ्यक्रम सुहाँउदो सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदर्शनीमा ढुंगा, माटोको बनोट, बोटबिरुवा, जंगली जनावर, वातावरण, स्वास्थ्य, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, खगोलीय पिण्डका बारेमा जानकारी दिने सामग्री प्रदर्शन गरिएको थियो ।
ग्यालेक्सी उच्च माध्यमिक विद्यालयकी भाइस प्रिन्सिपल सेरिना गुरुङले करिब १५ सय विद्यार्थीले प्रदर्शनीमा भाग लिएको जानकारी गराइन् । हरेक वर्ष ग्यालेक्सीमा विद्यार्थीहरुको सहभागितामा विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना गरिँदै आएको छ ।